[Wondershare] रद्दीटोकरीमा पुन:
तपाईंको सुरक्षित र पूरा रद्दीटोकरीमा पुन:
सबै मेटिएको फाइल कुशलतापूर्वक Mac मा रद्दीटोकरीमा चित्र, कागजात, भिडियो र अडियो फाइलहरू, इमेल, अभिलेख सहित सुरक्षित र पूर्ण रिकभर
रद्दीटोकरीमा मेटिएको फाइल पुन: प्राप्त Mac मा
रद्दीटोकरीमा आफ्नो डाटा नष्ट? र तपाईं सुरक्षित र पूर्ण फिर्ता चाहिन्छ? Wondershare डाटा रिकभरी उपकरण आफ्नो फ्लैश ड्राइव, भण्डारण यन्त्रहरू बाह्य र अन्य प्रकार तपाईंको हराएका भिडियो, फोटो, कागजात, संगीत, इमेल र धेरै ठीक गर्न सजिलो र safest तरिका हो। यसलाई अब तपाईं wondershare डाटा रिकभरी उपकरणको मद्दतले आफ्नो रद्दीटोकरीमा डेटा को कुनै पनि प्रकार ठीक गर्न सक्छन्, कुनै पनि सजिलो प्राप्त गर्न सक्दैन। तपाईँले हराएको डाटा को थम्बनेल पूर्वावलोकन र HFS + / बोसो / NTFS फाइल सिस्टम संग दुवै हार्ड ड्राइव र अन्य पोर्टेबल भण्डारण यन्त्रहरू को गहिरो स्क्यानहरू मार्फत दीप Recoveries प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
कागजात डाक्टर / DOCX, XLS / XLSX, PPT (PPT / PPTX), पीडीएफ, CWK, HTML (htm), INDD, ईपीएस, पृष्ठ, प्रमुख, संख्या, VSD, odt, ODP, ODS, ODG, ODF, RTF, plist , कर, मेट आदि
फोटो पीजी, झगडा (TIF), PNG, BMP, GIF PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, raf, SR2, MRW, DCR, डब्लुएमएफनिर्यातफिल्टर, DNG, ERF, कच्चा, ऐ, XCF, DWG, X3F, ARW आदि ।
समर्थित ओएस : Mac OS X 10.5 "चितुवा", म्याक ओएस एक्स 10.6 "हिम चितुवा", म्याक ओएस एक्स 10.7 "सिंह", म्याक ओएस एक्स 10.8 "पहाड सिंह", ओएस एक्स 10.9 "मैवरिक्स", ओएस एक्स 10,10 "योसेमाइट" , ओएस एक्स 10,11 "एल capitan
1 तपाईं पुन: प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ फाइलहरू को प्रकार छनौट
2 Mac मा रद्दीटोकरीमा को स्थान स्क्यान
3 पूर्वावलोकन र पुन: प्राप्त म्याक रद्दीटोकरीमा फाइलहरू
म्याक रद्दीटोकरीमा डाटा नोकसान परिदृश्य:
• रद्दीटोकरीमा फाइलहरू दुर्घटना द्वारा मेटाइएको छन्
कहिलेकाहीं तपाईंको रद्दीटोकरीमा फाइलहरू संयोगले नै वा एक प्रयोगकर्ता सिस्टम पर्छ गर्दैन हटाइएको छन्। मानव त्रुटि दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता डाटा हानि रद्दीटोकरीमा छ। प्रयोगकर्ताले इच्छा गडबड कुराहरू माथि गल्ति एक गलत keystroke मा पूर्ण डिस्क ड्राइभ सामग्रीहरू हटाएर। तपाईं मानव त्रुटि को कुरा छल्न केही गर्न सक्नुहुन्न।
• रद्दीटोकरीमा फाइलहरू उद्देश्य मा मेटाइएको
कसैले सजिलै डाटा रिकभर गर्न धेरै कठिन हुनेछ, तिनीहरू अधिकार केवल नाफारहित छोडने अघि सम्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण रद्दीटोकरीमा डाटा मेटाउन सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले रीसायकल बिन खाली भने।
रद्दीटोकरीमा लगत फाइलहरू मा • भाइरस आक्रमण
Windows मा तपाईँको रद्दीटोकरी डाटा कारण भण्डारण उपकरणको भ्रष्टाचार गर्न दुर्गम बन्न सक्छ। भाइरस आक्रमण भण्डारण उपकरणको भ्रष्टाचार पछि साधारण कारण छ। रद्दीटोकरीमा डाटा केही भाइरस पत्ता लगाउने प्रक्रिया चलिरहेको बेला मेटिन सक्छ। तार्किक विफलता सिस्टम भ्रष्टाचार, भाइरस संक्रमण वा हार्ड ड्राइभ ढाँचा फाइल कारण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईं wondershare डाटा रिकभरी उपकरणको मद्दतले बरामद तपाईँको रद्दी टोकरीमा डाटा प्राप्त गर्न सक्छन्।
• रीसायकल बिन बाइपास
Recyclebin मेटिएको फाइल संग Windows मा पूर्ण हुँदा, Windows OS स्वतः पुरानो मेटिएको केही फाइलहरू हटाउने द्वारा हालै मेटिएको फाइल लागि पर्याप्त ठाउँ सिर्जना गर्छ। फलस्वरूप ती पुराना फाइलहरू अब छैन प्रयोगकर्ताहरूलाई पहुँच योग्य छन्। तपाईंको रीसायकल बिन लागि अनुमति स्पेस राशि ती फाइलहरू वा प्राप्त गर्न सक्नुहुने हुनुको भिन्नता बनाउन सक्छ।
• ढाँचा वा विभाजन तपाईँको रद्दीटोकरी फाइलहरू हानि हुन सक्छ
Windows मा आफ्नो व्यक्तिगत रद्दीटोकरीमा डाटा विभाजन वा द्वारा मेटिनेछ गर्न सक्नुहुन्छ पुन विभाजन, हार्ड ड्राइभ ढाँचा वा उचित रद्दीटोकरीमा जगेडा बिना कुनै पनि विभाजन पुन ढाँचा।
कसरी जोगिन Mac मा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू गुमेको
हामी म्याक मा अनावश्यक फाइलहरू हटाइयो, यो लागि अनावश्यक फाइलहरू भण्डारण अस्थायी फोल्डरमा हुन सक्छ कि रद्दीटोकरीमा समावेश छ। तपाईं आफ्नो रद्दीटोकरीमा बिन खाली सम्म तपाईं आफ्नो रद्दीटोकरीमा यी मेटिएको फाइल पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। को अनावश्यक फाइल आकार भन्दा रद्दीटोकरीमा पकड गर्न सक्छन्, दुःखको कुरा नष्ट फाइलहरू रद्दीटोकरीमा देखि प्राप्त गर्न सकिंदैन के, या त ठूलो छ तर भने। यसरी तपाईं फाइलहरू भण्डारण गर्न रद्दीटोकरीमा प्रयोग गर्न सक्दैन।
हार्ड डिस्क को तापमान पनि उच्च छ भने, तपाईंको म्याक सिस्टम सामान्य काम रोक्न सक्छ। त्यो डाटा र हार्ड ड्राइभमा विफलता को हानि गर्न सक्छ। तपाईं प्रायः हेरचाह गर्न र मर्मतका तपाईंको म्याक सिस्टम आवश्यक छ। सम्झना तपाईंको म्याक काम तापमान पनि उच्च र स्वच्छ धूलो कणहरु छ lf जारी गरौं छैन।
तपाईँको फाइलहरू बारम्बार ब्याकअप सिर्जना गर्न आफ्नो Mac मा डाटा हानि रोकन लागि wisest विकल्प छ। यो जानकारी कुनै पनि महत्व छ भने, आफ्नो जगेडा सिस्टम विश्वसनीय र नियमित प्रयोग हुनुपर्छ।
स्थापना र नियमित आफ्नो एन्टिभाइरस अपडेट र हरेक हप्ता पूरा कम्प्युटर स्क्यान चलाउन।
तपाईँले आफ्नो हराएका फाइलहरू सबै ठीक सकेसम्म सानो रूपमा आफ्नो सिस्टम प्रयोग गर्नुहोस्। अधिक गतिविधि आफ्नो हार्ड डिस्क मा भइरहेको, तपाईंको नष्ट डाटा केही माथि लेखिएको हुन सक्छ कि ठूलो मौका।
म्याक ओएस मा रद्दीटोकरीमा लागि ज्ञान आधार
जहाँ म्याक ओएस एक्स मा खोजकर्ता हटाइयो छन् कि कुनै पनि फाइलहरू जाने रद्दीटोकरीमा छ। तपाईं पछि आफ्नो मन परिवर्तन भने कि, फाइलहरू उद्धार गर्न सकिन्छ त्यसैले तिनीहरू यहाँ राखिन्छ। तपाईं एक switcher छन् भने, त्यसपछि रद्दीटोकरीमा विंडोज रीसायकल बिन बराबर छ। (डकमा प्रदर्शन छेउमा छ भने, वा तल) रद्दीटोकरीमा डकमा को दायाँ-हात अन्त मा पाउन सकिन्छ। तपाईं रद्दीटोकरीमा सामग्रीहरू हेर्न गर्दा, तपाईंले त्यहाँ राखिएको मात्र वस्तुहरू र कुनै पनि अन्य खाताहरूको रद्दीको फोल्डर हेर्नुहोस्। अन्य लेख्य मात्रा वर्तमान हो भने, तपाईंले पनि यी मात्रा मा व्यक्तिगत रद्दीटोकरी फोल्डरहरू हुन सक्छ।
म्याक रद्दीटोकरीमा रिकभरी
Mac मा खाली रद्दीटोकरीमासार्नुहोस्
Mac मा खाली रद्दीटोकरी बल
रीसायकल बिन मेटिएको फाइल पुन: प्राप्त
रीसायकल बिन लुकाउन
खाली रीसायकल बिन बल